Itinye n'ọkwa cooktop FAQ - Zhongshan Amor Electrical Appliance Co., Ltd.
1.Dee ihe eji esi nri na-esi nri ngwa ngwa karịa ọkụkọ na ikuku gas?
Ee, onye na-eji ihe na efere efere na-eme ngwa ngwa karịa ihe e ji efere ọkụ eletrik na gas efere. Ọ na-ekwe ka njikwa ngwa ngwa nke ike nri yiri gas burners. Cookingzọ esi nri ndị ọzọ na-eji ire ọkụ ma ọ bụ ihe na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ mana ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ naanị ite ahụ.
Ihe oriri na-emepụta ihe ọkụ ọkụ ọ ga - eweta ike dị elu?
Mba, onye na-esi nri na-enyefe ike eletriki site na ntinye site na eriri waya mgbe ọkụ eletrik na-agafe na ya. Ugbu a na-emepụta oghere magnet na-agbanwe ma na-ewepụta okpomọkụ. Ite ahu n’enwe oku wee kpoo ihe di n’ime ya site na ndu ikpo oku. Ejiri iko-seramiiki nke na-eme ka ọkụ ghara ịmịcha ọkụ, nke mere na ọ bụ naanị obere ọkụ na-efu site na ala nke ite nke mebiri ike dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere ọkụ na-ere ọkụ na ọkụ eletrik nkịtị. Mmetụta ọgbụgba ọkụ anaghị eme ka ikuku dị gburugburu ụgbọ mmiri ahụ, na-ebute ike ọrụ ike ọzọ.
3.Enwere ihe ize ndụ ahụike sitere na radieshon unit?
Itinye nri na osi ite mepụta radieshon dị oke ala, dịka ikuku redio microwave. Ofdị radieshon a na-ebelata ihe ọ bụla n'ebe dị anya nke sentimita ole na ole ruo ihe dịka otu ụkwụ site na isi iyi ahụ. N'oge a na-ejikarị ya eme ihe, ị gaghị agaru nso na ngalaba ntinye ọrụ iji banye radieshon ọ bụla.
4.Onye na-esi nri na-achọ usoro pụrụ iche?
Ihe eji esi nri bụ naanị ihe na-ekpo ọkụ, yabụ, isi nri na-esi nri anaghị enwe ọdịiche dị na ụdị okpomọkụ ọ bụla. Agbanyeghị, kpo oku dị ngwa karịa site na iji ihe na-eme ihe.
5.Ọ bụ na ọ naghị esi nri n’elu ya? Ọ ga-agbaji?
Ejiri karama seramiiki dị n’elu ebe esi nri, nke siri ike ma na-anabata oke okpomọkụ na mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ na mberede. Igwe seramiiki siri ike, mana ọ bụrụ na i tufuo ihe dị arọ nke cookware, ọ nwere ike ịgbawa. Otú ọ dị, na ojiji a na-adị kwa ụbọchị, o yikarịrị ka ọ gaghị agbawa.
6. Ọ dị mma iji ihe eji eme ihe?
Eeh, ihe eji esi nri na-adị mma iji karịa ndị na-esi nri esi nri n'ihi na enweghị ọkụ ọkụ na ọkụ eletrik. Enwere ike ịtọ oge isi nri site na oge achọrọ na okpomọkụ, ọ ga-agbanyụ na-akpaghị aka mgbe emechara usoro nri iji zere overcooked food & ihe ize ndụ nke imebi osi ite.
ụdị niile dị ka ịnye ọrụ nri nri akpaaka maka nri dị mfe na nchekwa. N'ime arụ ọrụ nkịtị, ihu igwe nri na-ada jụụ iji metụ enweghị mmerụ ahụ mgbe ewepụrụ arịa nri ahụ.
7.M achọrọ m cookware pụrụ iche maka isi nri ihe ọkụ ọkụ?
Ee, cookware nwere ike buru akara nke na - achọpụta na ọ dakọtara na igwe na - esi nri. Igwe anaghị agba nchara ga-arụ ọrụ na ntinye ihe ọkụkụ ma ọ bụrụ na ntọala nke pan ahụ bụ ọkwa magnet nke igwe anaghị agba. Ọ bụrụ na ndọta na-arapara n'ala ala ite ahụ, ọ ga na-arụ ọrụ n'elu ya.